Vaovao - Ny tsy fitovizan'ny squumb dumbbell sy ny barbel squat
Miaraka amin'ny fandrosoan'ny fiarahamonina, tsy miova ny foto-kevitry ny hatsaran'ny olona. Nandritra ny fotoana lava, ny fenitra hatsarana amin'ny hatsarana toy ny hatsarana dia tondraka. Tsikelikely, ny olona dia tsy manenjika fihenan-danja loatra intsony, fa mitandrina bebe kokoa amin'ny fahasalamana. olana. Amin'izao fotoana izao dia miha malaza ny fanatanjahan-tena. Afaka mampiasa fahasalamana ny olona hahatratrarana ny tanjon'ny fanamafisana ny toe-batany sy hamolavola ny endrika vatana tonga lafatra. Amin'ny dingan'ny fitoviana, ny squat dia hetsika mahazatra be. Noho izany, inona no maha samy hafa ny squat dumbbell sy ny barbell squat?
Fitaovana fanofanana samy hafa
Na dia manao squat daholo aza izy ireo dia tsy mitovy ny fitaovana ampiasaina, ho hafa tanteraka ny vokany. Dumbbell squats sy barbell squats dia mampiasa fitaovana fiofanana hafa tanteraka. Ny fahasamihafana misy eo amin'ny dumbbells sy barbel dia mbola tena lehibe tokoa, ary ny rafitr'izy roa dia samy hafa tanteraka ihany koa. Indrindra amin'ny resaka lanja, somary kely ny lanjan'ny dumbbells. Amin'ny gym ankapobeny, ny dumbbell mavesatra indrindra dia manodidina ny 60 kg fotsiny. Ny lanjan'ny baribolaly dia lehibe tokoa, ao anatin'izany ny 250 kg, 600 kg, ary 1000 kg.
Dumbbell squats dia fampiofanana mavesatra miaraka amin'ny fanampian'ny dumbbells, izay mety hahatonga ny squats hahomby kokoa. Raha oharina amin'ny squats barbel, maivana kokoa ny squats dumbbell. Indrindra ho an'ireo mpanazatra izay efa mahay manao squats, raha te handroso lavitra ianao dia afaka manomboka amin'ny squumb dumbbell. Na dia tsy zakanao aza ny lanjan'ny dumbbells dia tsy mila miahiahy momba ny olana ara-piarovana ianao fa avelao fotsiny izy. Mampidi-doza ny squat barbel ary mitaky ny fanampian'ny fitaovana manokana na mpikarakara.
Olona mihatra tsy mitovy
Ny squat barbel dia mavesatra kokoa noho ny halalin'ny dumbbell, ary ny vokatra voajanahary dia miharihary kokoa. Raha te hanao ny làlan'ny tenany ho tsara tarehy sy malama fotsiny ny mpanazatra, ary tsy manenjika ny hozatry ny hozatra, dia afaka mamaly ny fangatahana ny squats dumbbell. Raha te hanana vokatra fampiofanana hozatra ny mpanazatra dia ilaina ny mampiasa barbela hanaovana squats. Noho izany, ny dumbbell squats sy ny barbel squats dia mety amin'ny olona samihafa. Izay safidinao dia miankina amin'ny filanao manokana.